Mmezu ozuzu maka ihe ịga nke ọma na -eto eto nduku - Magazin “sistemụ nduku”
Mmezu ozuzu maka ito eto nduku na -aga nke ọma
в Akụkọ ụlọ ọrụ
LLC "MAG" na -arụpụta mkpụrụ nduku maka ebumnuche dị iche iche eji eme ihe na ogige ya na saịtị ndị mmekọ ya. A na-emepụta ihe mkpụrụ na ọnọdụ agro-ecological echekwara (Samara, Ulyanovsk, Chelyabinsk, Mari El, Kaliningrad). Isi ụlọ ọrụ dị iche iche: SANYAVA, LISANA na JUVEL (nhọrọ Bavaria-Saat GbR), RED FANTASY (nhọrọ Europlant), QUEEN ANNA na RED LADY (nke Solana nyere ikike), ụdị RAYNBOU dị iche iche (Nhọrọ Comptoir Du Plant), BP 808 ( nhọrọ KWS Nduku BV).
Kemgbe 2018, MAG LLC na -esonye na mmemme ozuzu njikọta na A.G. Lorkha na Bavaria-Saat.
Na AGROSTAR Potato Breeding Center (akụkụ nke MAG LLC), a na-agafe ụdị dị iche iche ma họrọ ụdị ngwakọ ọhụrụ maka ịzụlite n'oge na ụdị mmalite. Ọma ụlọ ọrụ ahụ dabere na usoro amachibidoro nke na-eto eto na-enweghị nje na-ekwe nkwa n'okpuru ihe mkpuchi n'ọhịa.
Kwa afọ LLC "MAG" na -eme nyocha, na -achọpụta ike ụdị dị na ọnọdụ ihu igwe dị iche iche. Na 2021, na nzukọ ọmụmụ ihe emere na June 24 na mpaghara Astrakhan, ụdị RIVIERA, LISANA na SANYAVA gosipụtara ezigbo nsonaazụ. SEVIM ọhụrụ na -adọtakwa mmasị nke ndị ọrụ ugbo: tubers nke ụdị a wee bụrụ nke kachasị na ngalaba nnwale, ụfọdụ ụdị na -atụ ihe karịrị gram 300.
Egwurugwu dị iche iche
N’ụbọchị Ubi na mpaghara Rostov, MAG LLC gosipụtara ụdị LISANA, JUVEL, SANYAVA, RAINBOU, GRAND, RIVIERA. Ndị sonyere na nzukọ a nwere ekele nke ọma ụdị GRAND dị iche iche nke Russia. Na mgbakwunye na ịmịpụta mara mma na ọdịdị mara mma, ọ nwere nnukwu akọrọ na ọdịnaya starch. Ndị nhazi nduku mba ofesi na -egosikwa mmasị na ụdị a.
LLC "MAG" na-arụ ọrụ na nkwalite mkpụrụ sitere na ihe nnwale tube ma na-enye nnukwu nhọrọ nke ụdị nduku nwere ikikere: GRAND, LISANA, SANYAVA, RAYNBOU, BETTINA, RIVIERA. A kwadoro ngwaahịa niile ma mezuo ụkpụrụ Russia na nke mba ọzọ.
GRAND dị iche iche. Ọkara mmalite, oge na-eto eto: ụbọchị 85-90. Nke na-ekwenye ekwenye (ihe ruru 80 t / ha), ezubere maka ịkọ ihe na ebumnuche ịre nduku okpokoro na ahịa na ire ya n'ụdị asacha. Ọ bụ ama maka oke nguzogide ọkụ ya. Kwesịrị ekwesị maka nchekwa ogologo oge.
LISANA dị iche iche. Oge mmalite, oge na-eto eto: ụbọchị 60-65. Ụdị dịgasị iche iche nke nwere akpụkpọ anụ siri ike, dabara nke ọma maka owuwe ihe ubi. Uru: ịre ahịa dị elu, obere ihe na -agba ọchịchịrị nke mkpụrụ osisi tubers, iguzogide ọrịa nje, ọmarịcha ụtọ.
Sanyava dị iche iche
SANYAVA dị iche iche. Ọkara mmalite, oge na-eto eto: ụbọchị 80-85. Ezigbo maka ịsa, mbukota, nchekwa ogologo oge. Nwee nnukwu arụpụtaghị ihe, ezigbo mgbochi ọrịa. Nwere mmetụta dị ala maka mmebi mebere. Kwesịrị ekwesị maka nchekwa ogologo oge.
RAINBOW dị iche iche. Ọkara mmalite, oge na-eto eto: ụbọchị 80-85. Ọdịdị dị elu, dị mma maka ịsa na ndochi, na-eguzogide mmebi igwe. Nwere ezigbo ịdị n'otu na nnukwu ahịa nke tubers.
Ụlọ ọrụ "MAG" dị njikere maka imekọ ihe ọnụ bara uru, na -ekwe nkwa ntụkwasị obi yana ngwaahịa dị elu. Dị ka onye nnọchi anya enyere ndị mmekọ sitere na Germany (Bavaria-Saat, Europlant) na France (Comptoir Du Plant), ọ nwekwara ike ịnye ihe ndị mbubata dị elu.
isi: Ikike nke Mgbasa Ozi
Tags: Ụlọ ọrụ "MAG"mmepụta mkpụrụ nduku
Nsonaazụ nyocha ahụ maka ịzụrụ fatịlaịza ịnweta na mgbanwe ngwaahịa
Nchedo klaasị nke mbụ